ShweMinThar: Gym ဗဟုသုတ အတိုအထွာ
၁) မေး။ ကြွက်သားခွဲတာနဲ့ ထုတင်တာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ???
၂) မေး။ အကျစ်ဆော့တာနဲ့ အပွဆော့တာ ဘာကွာလဲ???
များသောအားဖြင့် ရင်ဘတ်ကြွက်သားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးတာများပါတယ်။ ရင်ဘတ်နှစ်ခုဟာ သီးခြားဖြစ်မနေပဲ၊ ပုံမပေါ်နေရင် ဘယ်လိုခွဲရမလဲပေါ့။
မြန်မာစကားအရ ထုတင်တာဆိုတာ Bulking လုပ်တယ်၊ ကြွက်သားခွဲတာ Definition ရအောင် လုပ်တယ်လို့ဆိုပါစို့။
Bulk လုပ်တယ်ဆိုတာ ကြီးလာအောင် လုပ်တာ၊ ထုတင်တယ်ဆိုရင် တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ များများစား၊ များများမပေါ့။
များများစားဆိုတာ အရင်ဆောင်းပါးတွေက ပြောတဲ့အတိုင်း Protein လုံလောက်အောင် ( ဥပမာ ပေါင်၁၄၀ လူဆို Protein 140grams) စား၊ Fats ကို 30-60grams စားပြီး ကျန်တာကို Carbohydrate နဲ့ဖြည့်၊ တစ်လကို ၂ပေါင်ကနေ ၃ပေါင် ကိုယ်အလေးချိန်တက်အောင်စားပါ။မစားသရွေ့ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှ ဘာထုကိုမှ တင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ တစ်ခုတည်းသော နည်းပါ။
ဒီနေရာမှာ ထုများများ မြန်မြန်တက်အောင် တစ်လ ၆ပေါင်တက်အောင် စားမယ်ဗျာ၊ မရဘူးလား ဆိုခဲ့ရင် စားပေါ့၊ ထုကတက်လာမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပိုတက်လာတဲ့ ၄ပေါင် ထုဟာ ကြွက်သားမဟုတ်ပဲ အဆီပိုတွေပဲဖြစ်မှာပါ။ လူတစ်ယောက်မှာ တစ်လကို ကြွက်သားပမာဏ ၂ပေါင်ကနေ ၃ပေါင်အထိပဲ တက်နိုင်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မလို့ တစ်လမှာ ၃ပေါင် ခန့်တက်အောင်စားတာကို Clean bulking (အဆီနည်းနည်းနဲ့ ထုတင်ခြင်း)လို့ ဆိုပြီး သင်လဲ ဒီလိုပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။
လေးလံတာ မပါ ဆိုတာကတော့ အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာ ခဏခဏ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကိုယ် ၈ကြိမ်ကနေ ၁၂ကြိမ်လောက်ပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ အလေးပမာဏကို သုံးပြီး ၄ခေါက် သို့မဟုတ် ၅ခေါက် ပြန်ကြော့တာပါပဲ။
အချို့ကတော့ ဒီ ထုတင်တဲ့ကာလမှာ ပိုလေးလံတာကို ၃-၅ ကြိမ် x ၄ ကြော့ကြော့တာမျိုးရှိပါတယ်။ Bulking အကြောင်းကို နောင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပေးပါမယ်။
နောက်တစ်ခု ကြွက်သားကွဲအောင် ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ ???
အဖြစ်နိုင်ဆုံးက လုံလောက်အောင် ကြီးတဲ့ ကြွက်သားမရှိရင် ကွဲစရာ မရှိပါဘူး။ ရွှံနဲ့ ပုံဖော်သလိုပေါ့။ ရွှံမရှိရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုပုံဖော်နိုင်မလဲ။ ကွဲသွားအောင်၊ ခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြွက်သားတက်အောင် လုပ်ပါ။
နောင်တစ်မျိုးလုပ်နိုင်တာက ရင်ဘတ်ကြွက်သား အပေါ်ပိုင်းကို လိုသလောက် မလေ့ကျင့်မိတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်းကြွက်သားသေးရင် ပြားနေတဲ့ ပုံပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မလို့ ရင်ဘတ်ဆော့ရင် ခုံ အလျားလိုက်မှာ လှဲပြီး တွန်းတဲ့ Regular bench press တစ်ခုထဲမဆော့၊ ခုံကို တစ်စောင်း အပေါ်ထောင်ထားတဲ့ Inclined press ကို ထည့်ဆော့ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့ Cable နဲ့ ရင်ဘတ်ဆော့တာကလဲ အပေါ်ပိုင်းကို ထိတာမလို့ နောင်တစ်ခေါက် ဆော့နိုင်အောင် အောက်မှာ ပုံပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာ Fitness အသုံးအနှုန်းတွေများ တယ်ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ အကျစ်တွေ အပွတွေ စုံလို့။
ကျစ်သွားအောင်၊ ပွသွားအောင်ဆိုတာ အစားအစာ ပမာဏကြောင့်ပါ။ Bodybuilding ဆိုတာ Gym မှာ သွားပြီး မ ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Gym မှာလုပ်တာက တစ်နာရီ၊ လုပ်ပြီးတာကို ပြန်အချောသပ်ဖို့က Gym အပြင်က ၂၃နာရီ။ ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးသလဲ???
Gym ပြင်ပ ၂၃နာရီမှာ အနားယူတာ၊ အိပ်တာ၊ အစားအစာ စားတာ ပါပါတယ်။ ပွလာတယ်ဆိုတာ အမှန်ရှင်းရှင်းပြောရရင် စွတ်စပ်စားလို့ပါ။ ပွလာတာ ကြည့်ကောင်းအောင် ပြောတာ၊ ဝလာတယ်ပြောရမှာ။
သင်ဟာ ပိန်သူဆိုပါစို့။ အပေါ်ကပြောသလို တစ်လ ၂ပေါင်ကနေ ၃ပေါင်လောက်ပဲ ထိန်းမစားပဲ ပိုစားလို့ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဝလာတာပါပဲ။ Clean bulking (၂ပေါင်တက်အောင်) လုပ်ရမယ့်အစား Dirty bulking (၅ပေါင်လောက်တက်အောင်) လုပ်နေရင် အရင်အစက ပိန်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Gym သွားလေ၊ ဝလာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ဝသူဆိုရင် သင်ချိန်စားရမယ့် ပမာဏဟာ တစ်လကို ၅ပေါင်ကနေ ၈ပေါင်အထိကျအောင် စားရပါမယ်။ ဒီလိုမှလျှော့မစားပဲ ဝတာကလဲဝ၊ Weight တက်အောင်လဲ ထပ်စားရင် ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းကမှ ကျစ်အောင် လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။
အကျစ်ဆော့တယ်၊ အပွဆော့တယ်ဆိုတာ အစားစားတာ မှန်လား၊ မှားလား အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်လို့။
ဟုတ်ကဲ့။ Post တွေ တင်ပြီးသားကလဲ များပါ့၊ ဆောင်းပါးတစ်ခု တစ်ခုဆိုရင်လဲ အကြောင်းအရာများလို့ ဖတ်လို့ မကုန် ဖြစ်ကျတယ်ဟုတ်။ အခု ရေးမယ့် မေးခွန်းတိုလေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာ ရှင်းလင်းအောင် ရေးခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် အမြန်မေး၊ အမြန်ဖြေ ပုံစံမျိုးနဲ့ အမေးများတာလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။ ခင်များတို့က တယ်လဲ ဂျီးများကျသကိုး။
၁။ ဘယ်အချိန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမလဲ။ မနက်လား၊ ညလား။
တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ ထွန်းတဲ့ကြယ်နဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းနားက ကြယ်နှစ်ခု တန်းတူ မကျတကျ အချိန်က အသင့်တော်ဆုံးပါ။ အဲအချိန်လုပ်ရင် လဆွဲအားရယ်၊ လွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ သံလိုက်ဓါတ်လှိုင်းတွေကြောင့် တစ်ရက်လုပ်တာ တစ်နှစ်လုပ်တာနဲ့ ညီမျှတဲ့ အကျိုးတွေ ရစေပါလိမ့်မယ်။
ဟာ .. ဟုတ်လို့လား မမေးနဲ့။ မဟုတ်ဘူး။ ❌
မနက်၊ ည ကြိုက်တဲ့ အချိန်လုပ်ပါ။ ကိုယ့် လူနေမှု ပုံစံ၊ ကိုယ်အားတဲ့ အချိန်မှာလုပ်ပါ။ နေ့ခင်းကစ အလုပ်ဆင်းရမလား၊ ကျောင်းတက်ရမလား။ ဒါဆို မနက်လုပ်။ ညဘက်ပဲ အားလား၊ ဒါဆို ညဘက်လုပ်။ အဓိကက လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ မိနစ် ၄၀၊ တစ်နာရီ အကြိုမှာ အစာတစ်ခုခုစားထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ အားအင် အပြည့်နဲ့ လုပ်လို့ရပါမယ်။
၂။ စလုပ်တာ ၈ ရက်ရှိပြီ။ အဲတာ ခုလက်မောင်းကြီး ကြီးလာလို့။
ဒါဆိုရင် ကံကောင်းလွန်းတယ်ဆိုရပါမယ်။ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ ပြောရမယ်ဆိုရင် လက်မောင်းကို သေချာ အချိန်ပေး လုပ်ဖူးပါတယ်။ ရှေ့ရော၊ နောက်ရော ဦးစားပေး အနေနဲ့ပေါ့။
နှစ်လအကြာမှာ လုံးပတ်ကို ပေကြိုးနဲ့တိုင်းတော့ လက်မဝက်ပဲ ထွားလာတယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ၈ရက်နဲ့ လက်တွေကြီးလာတယ်ဆိုတော့ လာမေးတဲ့ သူဆီမှာများ နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရှိနေသလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ် ၈ရက်နဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ လက်မောင်း၊ တင်ပါး၊ ခြေသလုံး၊ ဘယ်အသားပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ ကြီးမလာပါဘူး။ ❌
တစ်လမှာ နည်းမှန်၊ အစားမှန်၊ ပြင်းထန်မှု မှန်မှန်နဲ့လုပ်ရင်တောင် ၁-၃ ပေါင်ကြားပဲ ကြွက်သားတက်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးဆို ၁-၂ ပေါင်ကြားပေါ့။ ကြွက်သားတက်ခြင်းဟာ အလွန်တရာ ဖြေးညှင်းတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်ပါ။ ✅
၃။ ကြွက်သားတစ်ခုထဲကို နေ့တိုင်း မနားပဲ လုပ်ရမလား။
ဟိုးတစ်လောက အိမ်ဖော်မလေးတွေကို ညှင်းပန်း နှိပ်စက်တဲ့ အမှုတွေ ခေတ်စားသွားသေးတယ်။ အိပ်ချိန်နည်း၊ အစားအစာနည်းနဲ့ ကြာတော့ လူရော စိတ်ရော နားလန်မထူတော့ဘူး။
ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ကြွက်သားတစ်မျိုးထဲ၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံ တစ်မျိုးထဲကို နေ့တိုင်းလုပ်ခြင်းဟာလဲ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်ရင် လူရော စိတ်ပါ ပန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်ကျ အရင် လုပ်နိင်တဲ့ အလုပ်ပါ လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ❌
အနည်းဆုံး ကြားထဲမှာ ၁-၂ ရက်ခြားပါ။ ✅
၄။ အဆီတက်တာလား၊ ကြွက်သားတက်တာလား မသိဘူး။
ယောင်္ကျားလေးဆိုရင် ဘောင်းဘီကြပ်လာလား၊ အင်္ကျီကြပ်လာလား ပြန်မေးရမယ်။ အင်္ကျီအပေါ်ပိုင်း ရင်ဘတ်တွေ၊ ဂျိုင်းတွေ၊ ပုခုံးဆုံတွေ ကြပ်လာရင် ဒါက အကောင်း။ အဲ ၊ ဗိုက်ပဲ ပူလာပြီး ဘောင်းဘီ ခါးကြပ်လာရင် အနှုတ် လက္ခဏာ။ ❌
နောက်တစ်နည်းကတော့ ပိုလေးလံတာတွေ၊ ပိုခက်ခဲတာတွေ လုပ်နိုင်လာရင် ကြွက်သားတက်လာတယ် ဆိုရမယ်။ အဲ၊ အလေးချိန်တက်တာ ၄ ပေါင်အထပ်ဆို အဆီပါလာတာ ကြိမ်းသေတယ်။ ဒီအခါမျိုးဆို အစာပမာဏ ပြန်ထိန်းပါ။ ✅
၅။ Gym မှာ ၂-၃ နာရီဆော့တယ်။ လုံလောက်လား။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ၂-၃ နာရီ ဘယ်လိုတောင် ဆော့နိုင်တာလဲဗျာ လို့ ပြန်မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဆော့သမျှ ကာလပတ်လုံးမှာ ၁နာရီခွဲလောက်တောင် တစ်ခါမှ မဆော့ဖူးဘူး။ ၁ နာရီ မပြည့်တပြည့်မှာတင် ရှိသမျှ အားကုန်နေပြီ။ ဒီအချိန်မှာ ၂-၃ နာရီဆော့တဲ့လူက လုံလောက်လားဆိုတော့ ဖြေရခက်ပါ့။
သိရမှာက Gym ထဲက ကြာချိန်က အရေးမကြီးပါဘူး။ ❌
အကျိုးရှိရှိ သုံးလိုက်တဲ့ ကြာချိန်ကပဲ အရေးပါပါတယ်။
အရေအတွက်ထပ် အရည်အသွေးက အရေးကြီးတယ်ဆိုသလိုပေါ့။ သင်ဟာ မိနစ် ၄၀နဲ့ တစ်နာရီကြားမှာ ဖတ်ဖတ်မောနေပြီဆို Gym ထဲက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ✅
လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးကို ဘယ်နကြိမ်လုပ်ရမလဲ ???
ဒီမေးခွန်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသူ အတွက်ရော၊ အလေးမသူတွေ အတွက်ပါ အရေးကြီးပါတယ်။
လုပ်တာ နည်းနေလို့ အကျိုးမရှိ ဖြစ်တတ်သလို လုပ်တာများတိုင်းလဲ Over training ဖြစ်ပြီး အကျိုးမရှိ အနာတရ ဖြစ်တတ်တာမို့ ဆောင်းပါးပေါင်း များစွာမှ ကောက်နှုတ်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်နကြိမ်လဲ မပြောခင် အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းတွေ အကြောင်း အရင်ပြောရမှာပါ။
Muscle group - ကိုယ်လုပ်မယ့် ကြွက်သားပါ။ ဥပမာ ရင်ဘတ်ဆော့မယ်၊ တင်ပါး ပေါင်ဆော့မယ်ဆို ဒီနေ့ ဆော့မယ့် Muscle group ကို ရင်ဘတ်၊ တင်ပါး စသဖြင့် မှတ်ပါမယ်။
Exercises per muscle group - ဒီနေ့ ရင်ဘတ်ဆော့မယ်ဆို ရင်ဘတ်အတွက် ဆော့နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစားကို Exercises per muscle group လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အတွက်ဆို ပုံမှန် ဒိုက်ထိုး၊ ခြေထောက်ခုံပေါ်တင် ဒိုက်ထိုး (declined push ups)၊ လက်ခုံပေါ်တင် ဒိုက်ထိုး (inclined push ups) စသဖြင့် သုံးမျိုးမက ဆော့လို့ရပါတယ်။ ရင်ဘတ်ကြွက်သား တစ်ခုထဲကိုပဲ ပုံ ၃၊ ၄မျိုးလုပ်လို့ ရပြီး အဲလိုမျိုးကွဲတွေကို Exercises per muscle group လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Repetitions - အကြိမ်ရေ
ပုံစံတစ်မျိုးကို ဘယ်နကြိမ်လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အိပ်ထမတင် ပုံစံတစ်မျိုးကို တစ်ခါလုပ်ရင် ၁၀ ကြိမ် ထမယ်ဆိုရင် ၁၀ကြိမ်ကို 10 Reps လို့ ခေါ်ရမှာပါ။
Sets - အခေါက်ကြော့
အပေါ်က ဥပမာအတိုင်း အိပ်ထမတင် ပုံတစ်မျိုးကို ၁၀ ကြိမ်လုပ်ပြီး ၃ခေါက် ကြော့မယ်ဆို အခေါက်ရေကြော့တာကို Sets လို့ ခေါ်ပါတယ်။ 3sets ဆိုတာ ၃ခေါက် ပြန်ကြော့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
Volume - စုစုပေါင်းလို့ အလွယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ပုံစံ ၂မျိုး (2 exercises) ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ပုံစံ ၁ကို အခေါက်ရေ (Sets) ၃ ခေါက်ကြော့မယ်။ ၁ ခေါက်မှာ (1set) အကြိမ်ရေ ၁၀ကြိမ် (10reps) လုပ်မယ်ဆိုရင် ပုံစံ ၁မှာ ဒီလိုရှိပါလိမ့်မယ်။
ပုံစံ ၁ (ရင်ဘတ်)
၃ ခေါက် x ၁၀ ကြိမ် = ၃၀ ကြိမ်
ပုံစံ ၂ (ရင်ဘတ်) အကြိမ်တူ ဆိုပါစို့
စုစုပေါင်း (ရင်ဘတ်) = ၆၀ ကြိမ် ကို Volume လို့ခေါ်ပါတယ်။ High volume workout လို့ပြောတာက စုစုပေါင်း အကြိမ်အရေအတွက်များတယ် ဆိုလိုပြီး Low volume workout ဆိုတာကတော့ စုစုပေါင်း အကြိမ်ရေနည်းနည်းလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဒါဆိုရင် Muscle groups၊ exercises per muscle group၊ Reps၊ Sets နဲ့ Volume ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိပြီဆိုတော့ ကြွက်သားတစ်ခု (Muscle group) စီကို ဘယ်နှကြိမ် (Reps) လုပ်သင့်လဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီနေရာမှာ သိစေချင်တာက အခုပြောမယ့် အကြိမ်ရေတွေဟာ Guidelines ပါ။ ပုံသေနည်း အတိအကျ၊ ဒီလိုမှ ဒီလိုလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အခုပြောမယ့် အကြိမ်ရေတွေထက် ပိုလုပ်မှ ကြွက်သားပိုတက်လာတယ်၊ ဒီအကြိမ်ရေထက် နည်းလုပ်တဲ့သူကလဲ ကြွက်သားတက်လာတာပဲ ဆိုတဲ့ Result တွေလဲ ရှိမှာပါ။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တည်ဆောက်ပုံတွေ မတူတာမို့ တစ်သွေ မတိမ်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးမှာပြတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်က အနည်းဆုံးတော့ သံသယ၂မျိုးကို ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။
သံသယ ၁ - လုပ်တာနည်းနေသလား ထင်နေသူများ
လုပ်တာနည်းလွန်းနေရင်လဲ ကြွက်သားကြီးထွားဖို့ နှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။ ဒီလို လူများအဖို့ အောက်ကပြမယ့် အကြိမ်ထက်နည်းနေရင် ပိုလုပ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာ သိသွားမှာပါ။
သံသယ ၂ - လုပ်တာများနေသူများ
လုပ်တာ ပြင်းထန်လွန်း၊ များနေလွန်းရင်လဲ အရမ်းပင်ပန်းတတ်ပါတယ်။ ကြွက်သား ကြီးထွားလိုသူတွေ အဓိက မဖြစ်ချင်ဆုံးက Over training ဖြစ်ပြီး ဒါဏ်ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒီလို လူများ အတွက် အောက်ကပြမယ့် အကြိမ်ထက်များနေရင် ပြန်လျှော့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကြိမ်ရေလျှော့လိုက်ပေမယ့် သုတေသနတွေအရ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပြမယ့် အကြိမ်အရေအတွက်ဟာ ကြွက်သားကြီးလာဖို့ လူတော်တော်များများ အတွက်လုံလောက်တာမို့ Over training ဖြစ်ခြင်းကနေ လျော့ပေါ့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွက်သား တစ်မျိုးအတွက် အကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံး အကြိမ်အရေအတွက် ???
ကြွက်သား အကြီး ( တစ်ပတ် 60-120 reps)
ကြွက်သားအကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ တင်ပါး၊ ပေါင်၊ ဗိုက်၊ ရင်ဘတ်၊ နောက်ကြော၊ ဗိုက်ဘေးသား တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရင် တစ်ပတ်မှာ အကြိမ်ပေါင်း ၁၂၀ ကြိမ် ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။ ဥပမာ
တင်ပါး၊ ပေါင် ကြွက်သား
၄ ခေါက် x ၁၀ ကြိမ်= အကြိမ် ၄၀
ဒါဆိုရင် တင်ပါး၊ ပေါင် ကြွက်သားအတွက် တင် အကြိမ်ပေါင်း ၁၂၀ ရှိပါပြီ။ ပုံစံ ၃မျိုး မလုပ်ပဲ ပုံစံ ၂မျိုးပဲ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့
၅ ခေါက် x ၁၀ ကြိမ်= အကြိမ် ၅၀
စုစုပေါင်း အကြိမ် ၁၀၀ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဥပမာပါ။ တစ်ခေါက်မှာ ၁၀ ကြိမ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီ ၁၀ကြိမ်ဟာ တအားလွယ်မနေသင့်ပါဘူး။ လွယ်ကူနေရင် အလေးတုံး ကိုင်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က ဥပမာဟာ ကြွက်သားအကြီးတွေအတွက် သုံးလို့ရတာမို့ ဒိုက်ထိုး (ရင်ဘတ်ကြွက်သား)၊ အိပ်ထမတင် (ဗိုက်ကြွက်သား) စတာတွေအတွက်လဲ မှီငြမ်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က ဥပမာကိုပဲ စောဒကတက်ချင်တယ် ဆိုပါစို့။ တင်ပါးကြီးပဲ တစ်ပတ်မှာ ၂ရက်ဆော့မယ် ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ??
လွယ်ပါတယ်။ အပေါ်က အတိုင်းကို တစ်ဝက်ပိုင်းပြီး ၂ ရက်ခွဲဆော့ပေါ့လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ၂ ရက်ခွဲပြီး ပေါ့ပေါ့ဆော့လို့ ရသလို၊ တစ်ရက်ထဲနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းဆော့ထားရင် ကြွက်သား တစ်မျိုးအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ ၂ရက်ခွဲဆော့ရင်တော့ ၂ရက် Gym သွားရတာပေါ့။
ကြွက်သား အသေး (တစ်ပတ် ၃၀-၆၀ reps)
ကြွက်သားအသေးတွေ ဖြစ်တဲ့ လက်မောင်းနောက်၊ လက်မောင်းရှေ့၊ လက်ဖျံ၊ ခြေသလုံး စတာတွေအတွက် ကစားမယ်ဆိုရင် ကြွက်သားအကြီးထက် တစ်ဝက်လျော့၊ စုစုပေါင်း အကြိမ် (၃၀မှ ၆၀) အတွင်း ကစားလို့ရပါတယ်။
ကြွက်သားအသေးတွေကို အဓိက အာရုံစိုက်ပြီး အများကြီးလုပ်ဖို့ မလိုတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကြွက်သားအကြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကြွက်သားအသေးတွေကို အတန်အသင့် သုံးပြီးသားမို့ပါပဲ။ ဥပမာ ဒိုက်ထိုးတယ်ဆိုရင် ရင်ဘတ်ကြွက်သား (အကြီး) သုံးရုံတင်မကပဲ လက်မောင်းနောက်သား (အသေး)ပါ အတန်အသင့် သုံးရပါတယ်။ ဒိုက်ထိုးပြီးသွားလို့ လက်မောင်းနောက်သား ဆော့မယ်ဆိုရင် အကြိမ်ရေ ခပ်နည်းနည်း ထပ်ဆော့ရုံနဲ့ လုပ်လောက်တာမို့ ကြွက်သားအသေးတွေဟာ အများကြီး လုပ်စရာ မလိုပါဘူးလို့ ပြောရတာပါပဲ။
ဥပမာ လက်မောင်း နောက်သား
၂ခေါက် x ၁၀ကြိမ် = အကြိမ် ၂၀
၃ခေါက် x ၁၀ကြိမ် = အကြိမ် ၃၀
၂၃ခေါက် x ၁၀ကြိမ် = အကြိမ် ၃၀ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Gym မသွားခင် ဒီကြွက်သားကို တစ်ပတ် ဘယ်နရက်ဆော့မလဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်လား၊ နှစ်ရက်လား ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ကြွက်သားတစ်ခုကို ပုံစံ ဘယ်နမျိုးဆော့မလဲ စဉ်းစားပါ။ ကိုယ်ဆော့မယ့် ရက်ပမာဏ၊ ပုံစံကွဲပေါ်မူတည်ပြီး အပေါ်ကပြထားတဲ့ ကြွက်သားအကြီး (၆၀နဲ့ ၁၂၀ကြိမ်ကြား) ၊ ကြွက်သားအသေး (၃၀နဲ့ ၆၀ကြိမ်ကြား) Guide အတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တည်ဆောက်ပုံ အပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က Recovery ကောင်းတယ်၊ ကြွက်သား သိပ်မနာဘူးဆိုရင် နည်းနည်းပိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မမေ့ဖို့က ကြွက်သား ကြီးလာတယ်ဆိုတာ Gym ထဲမှာ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပဲ၊ နားနေချိန် အာဟာရဖြည့်တင်းမှသာ ဖြစ်တာမို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး နားရက်တွေမှာ ကောင်းကောင်းနား၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အစာတွေစားဖို့ မမေ့စေချင်ပါဘူး။
အားလုံးပဲ Over train/ under train အမှားလေးတွေကနေ ကျော်လွှားနိုင်ပြီး Gym ကနေ အကောင်းဆုံး အကျိုးရရှိပါစေ။
မူလရေးသားတင်ဆက်သည့်စာမျက်နှာ - Golden_Dreams